Illusion Webhusaiti - Dhizaini magazini
Webhusaiti Scene 360 magazini inotangisa Illusion muna2008, uye nekukurumidza inoita basa rayo rakanyanya kubudirira nekushanya anopfuura mamirioni makumi mana. Iyo webhusaiti yakatsaurirwa kuratidza zvinoshamisa zvisikwa muunyanzvi, dhizaini, uye firimu. Kubva pane hyperrealist tattoos kuenda kune yakanakisa maficha emaficha, kusarudzwa kwezviratidziro kunozoita kuti vaverengi voti "WOW!"
Zita rechirongwa : Illusion, Vagadziri zita : Adriana de Barros, Izita remutengi : Illusion.
Dhijitari uye nhepfenyuro dhizaini dhizaini
Webhusaiti Adriana de Barros Illusion